ရောမပေါလု၏ပေးစာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / စီရင်သောဩဝါဒစာ / ရောမပေါလု၏ပေးစာ
1:1 ရှင်ပေါလု, ယေရှုခရစ်တော်၏ကျွန်, တမန်တော်အဖြစ်ကိုခေါ်, ဘုရားသခင်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုအဘို့ကွဲကွာ,
1:2 သူကြိုတင်ကတိပေးခဲ့ပြီးသော, မိမိအအနာဂတ္တိကျမ်းမှတဆင့်, သန့်ရှင်းသောဘုရားကမျြးစာ၌,
1:3 မိမိသားတော်နှင့် ပတ်သက်., ဇာတိပကတိအားဖြင့်ဒါဝိဒ်၏အမျိုးအနွယ်ထံမှသူ့အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ခဲ့သူ,
1:4 ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို, အသေကောင်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကနေသန့်ရှင်းခြင်း၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်အညီသီလအတွက်ထိုသို့ခွဲခန့်မှတ်သားခဲ့သူ, ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏,
1:5 အဘယ်သူကိုအားဖြင့်သာကျေးဇူးတော်နှင့်တမန်တော်ခံရကြပြီ, သူ၏နာမကို ထောက်., လူအပေါင်းတို့သည်တပါးအမျိုးသားတို့တွင်ယုံကြည်ခြင်း၏နာခံမှု,
1:7 ရောမမြို့မှာနေသောသူအပေါင်းတို့သည်ရန်, ဘုရားသခင်၏ချစ်သူတို့, သန့်ရှင်းသူတို့အခေါ်တော်အဖြစ်. သငျသညျမှဂရေ့, နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး, ဘုရားသခင်ထံမှငါတို့အဘတည်းဟူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏အနေဖြင့်.
1:8 မုချ, I give thanks to my God, ယေရှုခရစ်အားဖြင့်, first for all of you, because your faith is being announced throughout the entire world.
1:12 အထူးသဖြင့်, to be consoled together with you through that which is mutual: your faith and mine.
1:13 But I want you to know, ကိုညီအစျ, that I have often intended to come to you, (though I have been hindered even to the present time) so that I might obtain some fruit among you also, just as also among the other Gentiles.
1:16 ငါဧဝံဂေလိတရားကိုရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိဖြစ်၏. ထိုသို့လူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်သူများအဘို့ကယ်တင်ခြင်းအလိုငှါဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏များအတွက်, ယုဒလူပထမဦးဆုံး, နဲ့ဂရိ.
1:17 ဘုရားသခင်၏တရားမျှတမှုပြုလုပ်ရန်အတွင်းထင်ရှားနေသည်, ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်တို့အားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်, ဒါကြောင့်ရေးသားခဲ့သကဲ့သို့: "ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်တဦးတည်းဘဝတွေကိုသည်။ "
1:18 ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်မတရားသဖြင့်ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားကိုချွတ်ကာမိမိဘာသာအားကိုးသူတွေကိုလူတို့တွင်ရှိသမျှ impiety နှင့်မတရားမှုကိုကျော်ကောင်းကင်မှထင်ရှားနေသည်.
1:19 အဘို့အဘယ်သို့ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူသိများသည်သူတို့ကိုထင်ရှားဖြစ်ပါသည်. ဘုရားသခင်အဘို့ထိုသူတို့ကအထင်ရှားစေတော်မူပြီ.
1:20 သူ့ကိုနှင့် ပတ်သက်. မမြင်ရတဲ့အရာများအတွက်ထင်ရှားကြပြီ, လောကီသားတို့သည်ဖန်ဆင်းခြင်းကတည်းက, ဖန်ဆင်းသောအရာအားဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ခံရ; မိမိအနိစ္စထာဝရသီလနှင့်ဘုရားထိုနည်းတူ, သူတို့သည်နောက်ဆင်ခြေရှိသည်သောထို့ကြောင့်ဤမျှလောက်.
1:21 ထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသိပေမယ့်အဘို့, သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုမချီးမွမ်းဘဲခဲ့, မဟုတ်သလိုကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း. အဲဒီအစား, သူတို့ကသူတို့ရဲ့အကြံအစည်အတွက်အားနည်းဖြစ်လာခဲ့သည်, နှင့်သူတို့၏မိုက်မဲသောစိတျနှလုံးယုတ်လျော့ခဲ့သည်.
1:22 အကြောင်းမူကား,, ပညာရှိဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကွှေးကျွောခွငျးနေစဉ်, သူတို့မိုက်မဲသောဖြစ်လာခဲ့သည်.
1:23 ထိုသူတို့ကဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သောယောက်ျား၏ပုံရိပ်တစ်ခု၏ပုံသဏ်ဍာနျအတှကျအမပျက်စီးတတ်သောဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေဖလှယ်, နှင့်ပျံအမှုအရာ, နှင့်ခြေလေးချောင်းတိရစ္ဆာန်သား, မြွေ၏.
1:24 ဒီအတွက်ကြောင့်, ဘုရားသခင့ညစ်ညူးဘို့မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စိတျနှလုံး၏အလိုဆန္ဒများကိုသူတို့လက်သို့အပ်, သူတို့အချင်းချင်းအမျက်နှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အလောင်းတွေကိုညှဉ်းဆဲသောကြောင့်,.
1:25 ထိုသူတို့သညျမုသာအဘို့ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားကိုဖလှယ်. ထိုသူတို့သတ္တဝါကိုးကွယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, အစားဖန်ဆင်းရှင်သည်ထက်, အားလုံးထာဝရမင်္ဂလာရှိသောသူသည်. အာမင်.
1:26 ဒီအတွက်ကြောင့်, God handed them over to shameful passions. ဥပမာအားဖြင့်, their females have exchanged the natural use of the body forause which is against nature.
1:27 နှင့်အလားတူ, the males also, abandoning the natural use of females, have burned in their desires for one another: males doing with males what is disgraceful, and receiving within themselves the recompense that necessarily results from their error.
1:29 having been completely filled with all iniquity, ရန်ငြိုး, fornication, avarice, wickedness; full of envy, murder, contention, deceit, spite, gossiping;
2:1 ဒီအတွက်ကြောင့်, အချင်းလူ, စီရင်သောသူသည်သင်တို့အသီးအသီး inexcusable ဖြစ်ပါသည်. သောအဘို့သင့်ကိုတရားစီရင်တော်မူပြီးသောနောက်တစ်ခု, သင်ကိုယ်တိုင်အရှုံးခံ. သင်တို့ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောအမှုတို့ကိုပြုဘို့အတူတူ.
2:3 ဒါပေမယ့်, အချင်းလူ, သငျသညျကဲ့သို့သောအရာများကိုပြုပါတဲ့သူတွေစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောအခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြုပါ, သင်သည်ဘုရားသခင်၏တရားနှင့်လွတ်မည်ဟုမထင်ကြဘူး?
2:4 သို့မဟုတ်သင်ကျေးဇူးပြုတော်နှင့်သည်းခံခြင်းနှင့်သည်းခံ၏စည်းစိမ်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြု? သငျသညျဘုရားသခငျ၏သနားကြင်နာမှုနောင်တသင့်ကိုခေါ်ကြောင်းသိရပါဘူး?
2:5 ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ hard နှင့် impenitent စိတျနှလုံးနှငျ့အညီ, သငျသညျကိုယျအဘို့အမျက်တော်သည်တက်သိုလှောင်သိမ်းဆည်း, ဘုရားသခငျ၏တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြင့်အမျက်ဒေါသနှင့်ဗျာဒိတ်တော်၏နေ့ရက်တိုင်အောင်.
2:7 သောသူတို့အား, လူနာသည်ကောင်းသောအကျင့်နှင့်အညီ, ဘုန်းအသရေနှင့်မပုပ်နိုင်သောအဖြစ်ကိုရှာခြင်း, မုချ, သူထာဝရအသက်ကိုရအပြစ်ပေးမည်ဟု.
2:8 သို့သော်အငြင်းပွားဖွယ်နေသောသူတို့ကိုအဘယ်သူသည်အမှနျတရားမှ acquiesce ပါဘူး, ဒါပေမဲ့မယ့်အစားသူတို့ကိုဒုစရိုက်အပြစ်၌ကိုး, သူဒေါသအမျက်နှင့်အမျက်ဆပ်လိမ့်မည်.
2:9 ဆငျးရဲဒုက်ခနှင့်နာကြဉ်းခြင်းဝေဒနာဆိုးယုတ်သောအလုပ်ဖြစ်တယ်သောလူသား၏စိတ်ဝိညာဉ်၌ရှိသမျှသောအပျေါမှာဖြစ်ကြောင်း: ယုဒလူပထမဦးဆုံး, ထို့အပြင်ဂရိ.
2:10 သို့သော်ဘုန်းအသရေနှင့်မိဿဟာကောင်းသောအရာကိုပြုပါသောသူအပေါင်းတို့အဘို့ရှိပါတယ်: ယုဒလူပထမဦးဆုံး, ထို့အပြင်ဂရိ.
2:16 unto the day when God shall judge the hidden things of men, ယေရှုခရစ်အားဖြင့်, according to my Gospel.
2:21 ရလဒ်အနေဖြင့်, you teach others, but you do not teach yourself. You preach that men should not steal, but you yourself steal.
2:25 မုချ, circumcision is beneficial, if you observe the law. But if you areabetrayer of the law, your circumcision becomes uncircumcision.
2:26 ဆိုတော့, if the uncircumcised keep the justices of the law, shall not this lack of circumcision be counted as circumcision?
2:28 ForaJew is not he who seems so outwardly. Neither is circumcision that which seems so outwardly, ဇာတိပကတိ၌.
2:29 ButaJew is he who is so inwardly. And circumcision of the heart is in the spirit, not in the letter. For its praise is not of men, ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်၏.
3:1 သို့ဖြစ်., what more is the Jew, or what is the usefulness of circumcision?
3:2 Much in every way: ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, မုချ, because the eloquence of God was entrusted to them.
3:4 For God is truthful, but every man is deceitful; ဒါကြောင့်ရေးသားခဲ့သကဲ့သို့: "ထို့ကြောင့်, သင်သည်သင်၏စကားဖြောင့်မတ်နေကြတယ်, and you will prevail when you give judgment.”
3:6 (I am speaking in human terms.) Let it not be so! ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, how would God judge this world?
3:9 လာမယ့်ဆိုတာဘာလဲ? Should we try to excel ahead of them? By no means! For we have accused all Jews and Greeks to be under sin,
3:10 ဒါကြောင့်ရေးသားခဲ့သကဲ့သို့: “There is no one who is just.
3:12 အားလုံးလှည့်ဖြားကြပြီ; အတူတူသူတို့အချည်းနှီးဖြစ်ကြပြီ. ကောင်းသောအမှုကိုပြုသောသူတယောက်မျှမရှိ; တဦးတည်းပင်မရှိ.
3:13 သူတို့၏လည်ချောင်းသည်ဖွင့်လှစ်သည်သင်္ချိုင်းတော်ကိုဖြစ်ပါသည်. မိမိတို့လျှာနှင့်အတူ, သူတို့ပရိယာယ်သရုပ်ဆောင်ထားသည်. အဆိပ်သူတို့နှုတ်ခမ်းအောက်.
3:21 ယခုမူကား, ပညတ္တိကျမ်းမပါဘဲ, ဘုရားသခင်၏တရားမျှတမှုကို, ပညတ္တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ္တိကျမ်းတို့သည်သက်သေခံပြီးသောမှ, ထင်ရှားစေခဲ့ပြီး.
3:22 ဘုရားသခငျ၏တရားမျှတမှုကို, သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ယုံကြည်ခြင်းသော်လည်း, နေသောသူအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်သူတို့အားကျော်၌ရှိ၏. အဘယ်သူမျှမခြားနားခြင်းရှိ၏များအတွက်.
3:25 ဘုရားသခငျသညျရာ၌အဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဘယ်သူကို, မိမိအသွေး၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်, ယခင်ပြစ်မှုများ၏လွှတ်တော်မူသည်တရားမျှတမှုထုတ်ဖေါ်ရန်,
3:26 ဘုရားသခငျ၏သည်းခံအားဖြင့်, ဤအချိန်၌မိမိတရားမျှတမှုကိုထုတ်ဖေါ်ရန်, သူကိုယ်တိုင်ရုံတစ်ခုမှာနှင့်ယေရှုခရစ်၏ယုံကြည်ခြင်း၏ဖြစ်ပါသည်မည်သူမဆို၏တရားမျှတနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်စေခြင်းငှါဤမျှ.
3:27 သို့ဖြစ်., သင့်ရဲ့ Self-လို့လညျးသည်အဘယ်မှာရှိ? ပယ်သည်. အဘယ်တရားမှတဆင့်? အကျင့်ကိုကျင့်သောအ? အဘယ်သူမျှမ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲယုံကြည်ခြင်း၏ပညတ်တရားအားဖြင့်.
3:28 ဖြောင့်မတ်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခံရဖို့လူတစစ်ကြောစီရင်တော်မူဘို့, ပညတ်တရား၏အကျင့်မရှိဘဲ.
3:29 ယုဒလူတို့သညျဘုရားသခငျ၏သာမဟုတျဘဲလည်းတပါးအမျိုးသားတို့ဖြစ်ပါသည်? အခြားတစ်ဖက်မှကြည့်သော်, တပါးအမျိုးသားတို့သည်လည်း.
3:31 Are we then destroying the law through faith? Let it not be so! အဲဒီအစား, we are making the law stand.
4:1 သို့ဖြစ်., အာဗြဟံအောင်မြင်ခဲ့ကွောငျးအဘယ်သို့ဆိုရကြလိမ့်မည်, ငါတို့အဘဇာတိပကတိအားဖြင့်အဘယ်သူသည်?
4:2 အာဗြဟံသည်အကျင့်အားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခဲ့လျှင်အဘို့, သူဘုန်းအသရေရှိသည်မယ်လို့, ဒါပေမယ့်ဘုရားမနှင့်အတူ.
4:3 သမ္မာကျမ်းစာ၌ကားဟုပြောဆိုကြဘာလုပ်တယ်များအတွက်? "အာဗြံသည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သည်, ထိုသို့တရားမျှတမှုတို့အားသူ့ကိုမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ "
4:4 သို့သော်အဘို့သူအလုပ်လုပ်တယ်, လုပ်ခကျေးဇူးတော်အတိုင်းမှတ်ကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ကြွေးမြီသည်နှင့်အညီ.
4:5 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, သူအလုပ်မလုပ်ပါဘူးများအတွက်, ဒါပေမယ့်မတရားသောသူတို့အတွက်အပြစ်လွှတ်သောသူသူ့ကိုယုံကြည်သောသူ, သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတရားမျှတမှုတို့အားမှတ်ဖြစ်ပါတယ်, ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်နှင့်အညီ.
4:6 အလားတူပင်, ဒါဝိဒျသညျလညျးလူသား၏မင်္ဂလာမိန့်, အဘယ်သူကိုမှဘုရားသခငျသညျအကျင့်မရှိဘဲတရားမျှတမှုဆောင်တတ်၏:
4:8 မင်္ဂလာရှိ၏သခင်ဘုရားကိုအပြစ်ဖြေရာအပြစ်ရှိသည်ဟုမှတ်တော်မမူသောသူမှထိုလူဖြစ်၏။ "
4:9 Does this blessedness, ထို့နောက်, remain only in the circumcised, or is it even in the uncircumcised? For we say that faith was reputed to Abraham unto justice.
4:16 ဒီအတွက်ကြောင့်, it is from faith according to grace that the Promise is ensured for all posterity, not only for those who are of the law, but also for those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all before God,
4:17 in whom he believed, who revives the dead and who calls those things that do not exist into existence. ကျမ်းစာလာသည်ကား: “I have established you as the father of many nations.”
4:20 ပြီးနောက်, ဘုရားသခင်၏ကတိတော်အတွက်, သူမယုံကြည်မှုများထဲကချီတုံချတုံမပြုခဲ့, ဒါပေမဲ့မယ့်အစားသူကယုံကြည်ခြင်း၌ခိုင်ခံ့စေ၏ခဲ့သည်, ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း,
4:21 ဘာပဲဘုရားသခင့ကတိပြုထားသည်အများဆုံးအပြည့်အဝသူတို့သည် သိ., သူလည်းပြီးမြောက်ဖို့တတ်နိုင်.
4:22 နှင့်ဤအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ဒါကြောင့်တရားမျှတမှုတို့အားသူ့ကိုမှတ်ခဲ့သည်.
4:23 ယခုဤစာဖြင့်ရေးသားထားပြီး, ဒါကြောင့်တရားမျှတမှုတို့အားသူ့ကိုမှတ်ခဲ့ကွောငျး, မိမိအဘို့အလို့ငှါမသာ,
4:24 ဒါပေမယ့်လည်းကျနော်တို့ရဲ့ဘို့အလို့ငှါ. တူညီသောကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ရကြလိမ့်မည်များအတွက်, ငါတို့သည်ထိုသူအာ​​းယုံလျှင်သေခြင်းမှငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူသောသူကိုတက်,
4:25 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြစ်မှုများ၏လက်သို့အပ်ခဲ့သူ, အဘယ်သူသည်ငါတို့အဘို့တဖန်ထမြောက်မျှတမှု.
5:1 ထို့ကြောင့်, having been justified by faith, let us be at peace with God, through our Lord Jesus Christ.
5:3 ထိုမျှမကသာ, but we also find glory in tribulation, knowing that tribulation exercises patience,
5:5 ဒါပေမယ့်မြော်လင့်ရာအခြေအမြစ်မရှိမဖြစ်, ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌သွန်းလောင်းသောကွောငျ့, ငါတို့အားပေးတော်မူခဲ့သူ.
5:6 သို့သျောလညျးအဘယ်ကြောင့်ခရစ်တော်အားပြုလေ၏, ကျနော်တို့နေဆဲအိုမင်းခဲ့ကြစဉ်, သင့်လျော်သောအချိန်တွင်, ထိုမတရားသောသူတို့အတွက်သည်သေခြင်းဆင်းရဲခံရ?
5:7 အခုဆိုရင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုအနိုင်နိုင်တရားမျှတမှုဘို့အလိုငှါအသေခံဖို့လိုလိုလားလားရှိစေခြင်းငှါ, ဥပမာအားဖြင့်, ဖြစ်ကောင်းတစ်စုံတစ်ဦးကောင်းတစ်ဦးယောက်ျား၏မျက်နှာကို ထောက်. သေဖို့ဝံ့စေခြင်းငှါ,.
5:8 သို့သော်ဘုရားသခင်ကထိုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြသ, ကျနော်တို့မရှိသေးပါအပြစ်များသောသူဖြစ်ကြသတည်းနေစဉ်, သင့်လျော်သောအချိန်တွင်,
5:9 ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေခံ. ထို့ကြောင့်, မိမိအသွေးအားဖြင့်အပြစ်နှင့်လွတ်ယခုခံတော်မူပြီးမှ, အားလုံး ပို. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အမျက်ဒေါသကနေသူ့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရကြလိမ့်မည်.
5:10 သားတော်အသေခံသောအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ရန်ငြိမ်းခဲ့ကြလျှင်အဘို့, ကျနော်တို့နေဆဲရန်သူများကိုနေစဉ်, အားလုံး ပို. ဒါ, ပြန်. အခံ, ကျနော်တို့သူ၏အသက်တာအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်လိမ့်မည်ဟု.
5:11 ထိုမျှမကသာ, ငါတို့မူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၌ဘုန်းအသရေလည်း, အဘယ်သူကိုအားဖြင့်သာယခုပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးခံရကြပြီ.
5:12 ထို့ကြောင့်, just as through one man sin entered into this world, and through sin, death; so also death was transferred to all men, to all who have sinned.
5:15 But the gift is not entirely like the offense. For though by the offense of one, many died, yet much more so, by the grace of one man, ယရှေုခရ, has the grace and gift of God abounded to many.
5:16 And the sin through one is not entirely like the gift. မုချမျာ​​းအတွက်, the judgment of one was unto condemnation, but the grace toward many offenses is unto justification.
5:18 ထို့ကြောင့်, just as through the offense of one, all men fell under condemnation, so also through the justice of one, all men fall under justification unto life.
5:19 အကြောင်းမူကား,, just as through the disobedience of one man, many were established as sinners, so also through the obedience of one man, many shall be established as just.
5:21 သို့ဖြစ်., just as sin has reigned unto death, so also may grace reign through justice unto eternal life, through Jesus Christ our Lord.
6:4 For through baptism we have been buried with him into death, သောကြောင့်, in the manner that Christ rose from the dead, by the glory of the Father, so may we also walk in the newness of life.
6:6 For we know this: that our former selves have been crucified together with him, so that the body which is of sin may be destroyed, နှင့်ထိုမှတပါး, so that we may no longer serve sin.
6:11 ဆိုတော့, you should consider yourselves to be certainly dead to sin, and to be living for God in Christ Jesus our Lord.
6:12 ထို့ကြောင့်, let not sin reign in your mortal body, such that you would obey its desires.
6:13 Nor should you offer the parts of your body as instruments of iniquity for sin. အဲဒီအစား, offer yourselves to God, as if you were living after death, and offer the parts of your body as instruments of justice for God.
6:15 လာမယ့်ဆိုတာဘာလဲ? Should we sin because we are not under the law, but under grace? Let it not be so!
6:22 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, having been freed now from sin, and having been made servants of God, you hold your fruit in sanctification, and truly its end is eternal life.
7:1 Or do you not know, ကိုညီအစျ, (now I am speaking to those who know the law) that the law has dominion overaman only so long as he lives?
7:2 ဥပမာအားဖြင့်,awoman who is subject toahusband is obligated by the law while her husband lives. But when her husband has died, she is released from the law of her husband.
7:3 ထို့ကြောင့်, while her husband lives, if she has been with another man, she should be called an adulteress. But when her husband has died, she is freed from the law of her husband, ထိုကဲ့သို့သော, if she has been with another man, she is not an adulteress.
7:4 ဆိုတော့, ငါ့ညီအစ်ကိုတို့, you also have become dead to the law, through the body of Christ, so that you may be another one who has risen from the dead, in order that we may bear fruit for God.
7:7 What should we say next? Is the law sin? Let it not be so! But I do not know sin, except through the law. ဥပမာအားဖြင့်, I would not have known about coveting, unless the law said: “You shall not covet.”
7:11 For sin, receiving an opportunity through the commandment, seduced me, နှင့်, through the law, sin killed me.
7:12 ဆိုတော့, the law itself is indeed holy, and the commandment is holy and just and good.
7:15 For I do things that I do not understand. ငါသည်ကျင့်ချင်သောကောင်းကျိုးကိုမလုပ်ကြပါဘူးများအတွက်. But the evil that I hate is what I do.
7:16 ဒါကြောင့်, when I do what I do not want to do, I am in agreement with the law, that the law is good.
7:18 အဘယ်သို့ငါသည်ကောင်းငါ့အထဲမှာအရှငျနထေိုငျမဟုတျကွောငျးကိုသိရဘို့, ကြောင်း, ငါ၏အသားအတွင်း. ငါ့ထံသို့နီးကပ်ကောင်းသောမုသာစကားကိုလုပ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်ဘို့, ဒါပေမယ့်ထိုကောင်းမွန်သောထဲကနေတင်ဆောင်လာသော, ငါမရောက်ရှိနိုင်ပါ.
7:19 ငါသည်ကျင့်ချင်သောကောင်းကျိုးကိုမလုပ်ကြပါဘူးများအတွက်. သို့သော်မယ့်အစား, ငါသည်ကျင့်ချင်ကြဘူးသောဒုစရိုက်ကိုပြု.
7:20 အခုတော့ငါလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြုလျှင်, အဲဒါကိုလုပ်နေတာပါ၏သောသူသည်နောက်တဖန်မငါ, ဒါပေမယ့်ငါ့အထဲမှာအသက်ရှင်တော်မူသည်ဆိုင်သောအပြစ်ဖြေ.
7:21 ဆိုတော့, ငါပညတ်တရားတော်ကိုတွေ့ရှ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အတွင်းကောင်းသောအကျင့်လိုသောအားဖြင့်, မကောင်းသောအမှုအကြှနျုပျကိုအနားမှာနီးကပ်တည်ရှိသည်သော်လည်း.
7:22 ငါသည်ဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားတော်တို့နှင့်အတူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်၏, အတွင်းလူသည်နှင့်အညီ.
7:23 သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့ကိုယ်အတွင်းကိုအခြားဥပဒေကရိပ်မိ, ကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံး၏ပညတ်တရားကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေ, နှင့်ငါ့ကိုယ်၌အပြစ်တရားအားဖြင့်ငါ့ကို captivati​​ng.
7:24 ငါဖြစ်၏ကြောင့်မပျော်လူကို, အဘယ်သူသည်ဤအသေကောင်မှငါ့ကိုအပြန်လွှတ်လိမ့်မည်?
7:25 ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်, ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့သခင်! ထို့ကြောင့်, ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ဖြင့်ဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားတော်အစေခံ; ဒါပေမယ့်အသားနှင့်, အပြစ်တရား၏တရား.
8:1 ထို့ကြောင့်, ယေရှုခရစ်၌နေသောသူတို့အဘို့အဘယ်သူမျှမရှုံ့ချယခုရှိပါတယ်, ဇာတိပကတိအားဖြင့်လမ်းလျောက်ကြသည်မဟုတ်သူကို.
8:3 ဤအဥပဒေအရမဖြစ်နိုင်ဘူးခဲ့သော်လည်းများအတွက်, ဒါကြောင့်ဇာတိပကတိအနေဖြင့်အားနည်းခဲ့လို့, ဘုရားသခင့ဆိုးယုတ်သောဇာတိပကတိ၏သဏ္ဌာန်၌သူ၏ကိုယ်ပိုင်သားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူသောကြောင့်, အပြစ်တရား၏, ဇာတိပကတိအားဖြင့်အပြစ်အရှုံးခံနိုင်ရန်အတွက်,
8:4 ပညတ်တရား၏အကြောင်းပြချက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်စုံစေခြင်းငှါဤမျှ. ငါတို့သည်ဇာတိပကတိနှင့်အညီလမ်းလျောက်ကြသည်မဟုတ်များအတွက်, ဒါပေမယ့်စိတ်ဝိညာဉ်အားသည်နှင့်အညီ.
8:5 သားနှင့်တကွသဘောတူညီချက်၌နေသောသူတို့အဘို့ဇာတိပကတိ၏အမှုအရာတို့ကိုအောက်မေ့နေကြသည်. သို့သော်ဝိညာဉ်နှင့်အတူသဘောတူညီချက်၌နေသောသူတို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်၏အမှုအရာအောက်မေ့နေကြသည်.
8:6 ဇာတိပကတိအသမ္မာသတိသည်သေခြင်းဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်ဝိညာဉ်တော်သည်သမ္မာသတိဘဝနှင့်မိဿဟာယဖြစ်ပါသည်.
8:7 ထိုအခါဇာတိပကတိ၏ဉာဏျပညာကိုဘုရားသခင်အား inimical ဖြစ်ပါသည်. အဘို့ဘုရားသခငျ၏တရားကိုဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး, မဖြစ်နိုင်ပါ.
8:9 သင်သည်ထိုဇာတိပကတိ၌နေကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်၌စိတ်ဝိညာဉ်အား, ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အတွင်းအသက်ရှင်မှန်သည်ဆိုပါက. သို့သော်မည်သူမဆိုခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်, သူ့ကိုပိုင်ပါဘူး.
8:10 သို့သော်ခရစ်တော်သည်သင်တို့အတွင်း၌လျှင်, ထို့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအမှန်ပင်သည်အသေဖြစ်၏, အပြစ်တရားကိုရည်မှတ်, ဒါပေမယ့်စိတ်ဝိညာဉ်အားအမှန်တကယ်အသက်ရှင်တော်မူသည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျှတမှု၏.
8:11 သို့သော်သူ့ကို၏ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အတွင်းအသေကောင်ဘဝတွေကိုမှယေရှုထမြောက်စေတော်မူသောသူလျှင်, ထို့နောက်ယေရှုခရစ်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသောသူမူလည်းသေတတ်သောသင်တို့၏အလောင်းများကို enliven ရကြလိမ့်မည်, သငျသညျအသကျရှငျအတွင်းဝိညာဉ်တော်အားဖွငျ့.
8:12 ထို့ကြောင့်, ကိုညီအစျ, ငါတို့သည်ဇာတိပကတိဖို့ကိုကိုက်မဟုတ်, ဇာတိပကတိအားဖြင့်အသက်ရှင်ရန်သကဲ့သို့.
8:13 သငျသညျဇာတိပကတိအားဖြင့်အသက်ရှင်လျှင်များအတွက်, သင်သေရလိမ့်မည်. သို့သော်လျှင်, ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်, သငျသညျဇာတိပကတိအကျင့်ကို mortify ၏, သငျသညျအသကျရှငျရကြလိမ့်မည်.
8:15 တဖန်သင်တို့ကိုလက်ခံရရှိကြပြီမဟုတ်, နောက်တဖန်အ, ကြောက်ရွံ့ခြင်း၌ကျွန်၏ဝိညာဉျ, သင်မူကားသားတို့၏မွေးစား၏ဝိညာဉ်တော်သည်ခံရကြပြီ, အဘယ်သူကိုငါတို့ဟစျကျွော: "အဗ်ဗ, ခမညျးတျော!"
8:17 သို့သျောကြှနျုပျတို့၏သားဖြစ်ကြ၏လျှင်, ထို့နောက်ငါတို့သည်လည်းအမွေခံဖြစ်ကြ: ဘုရားသခငျ၏မုချအမွေခံ, ဒါပေမယ့်လည်းခရစ်တော်နှင့်အတူပူးတွဲအမွေခံ, သို့သျောလညျးဤကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်, ငါတို့သည်သူ့ကိုနှင့်အတူဆင်းရဲခံရလျှင်, ငါတို့သည်လည်းထိုသခင်နှင့်အတူဘုန်းထင်ရှားတော်မူခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်.
8:20 သတ္တဝါအဘို့အနတ္တမှဘာသာရပ်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, မဟုတ်လိုလိုလားလား, ဒါပေမယ့်ဘာသာရပ်ဖန်ဆင်းတော်မူသော One ၏မျက်နှာကို ထောက်., မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းဆီသို့.
8:21 သတ္တဝါကိုယ်တိုင်ကလည်းအကျင့်ပျက်ခြစားမှု၏ကျွန်အထဲကနှုတ်ယူခံရကြလိမ့်မည်များအတွက်, ဘုရားသခငျ၏သားတို့၏ဘုန်းအသရေ၏လွတ်လပ်မှုသို့.
8:22 ကျနော်တို့ရှိသမျှသတ္တဝါအတွင်းပိုင်း groans ကွောငျးသိရများအတွက်, ကလေးမွေးဖွားပေးကမ်းလျှင်အဖြစ်, ယခုတိုင်အောင်;
8:23 သာဤသူ, ဒါပေမယ့်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်, ငါတို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်၏ပထမဦးဆုံးသီးသောအသီးကိုကိုင်ထားကတည်းက. ငါတို့သည်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ညည်းတွားမြည်တမ်းအတွင်းများအတွက်, ဘုရားသခငျ၏သားကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးစားထားချက်အရ, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏အရွေး.
8:24 ကျနော်တို့မြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ကြပြီ. သို့သော်မြင်ကြသောမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းမြော်လင့်စရာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး. လူတရာတစ်ခုခုကိုမြင်သောအခါများအတွက်, အဘယ်ကြောင့်သူမျှော်လင့်?
8:25 သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မမြင်မိပါဘူးအဘယျသို့အဘို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကတည်းက, ကျနော်တို့စိတ်ရှည်မှုနှင့်အတူမြော်လင့်လျက်.
8:26 နှင့်အလားတူ, ဝိညာဉ်တော်သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကူညီပေးသည်. ငါတို့သည်အပ်သည်အတိုင်းဆုတောင်းရန်ဘယ်လိုသိမ, ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်မိမိကိုမိမိ ineffable ညညျးတှားခွငျးနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ကိုယ်စားမေးတယ်.
8:27 ထိုအစိတ်နှလုံးကိုကို examine သောသူမူကားဝိညာဉ်တော်သည်ရှာကြံသိ, သူသည်ဘုရားသခင်နှင့်အတူအညီသန့်ရှင်းသူတို့၏ကိုယ်စားမေးတယ်သောကြောင့်,.
8:31 ဒါကြောင့်, ကျွန်တော်ဤအရာများကိုအနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြောသင့်? ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားအဘို့ဖြစ်၏ခဲ့လျှင်, ငါတို့တဘက်၌အဘယ်သူသည်?
8:32 ပင်မိမိသားတျောမနှမြောခဲ့သောသူသည်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူအပေါင်းတို့၏မျက်နှာကို ထောက်. သူ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်, သူဘယ်လိုမရလည်းတတျနိုငျသ, သူနှင့်အတူ, အကြှနျုပျတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေးပြီ?
8:33 အဘယ်သူသည်ဘုရားသခင်၏ရွေးကောက်တော်၌အပြစ်တင်ခွင့်ကိုဖြစ်စေတော်မူမည်? ဘုရားသခင့အပြစ်လွှတ်သောသူတည်း;
8:34 ပြစ်တင်ရှုတ်ချတဲ့သူတဦးကိုအဘယ်သူသည်? သေဆုံးသွားခဲ့သူယေရှုခရစ်တော်၌, အဘယ်သူသည်အမှန်ပင်လညျးတဖနျထမြောက်တော်မူပြီ, ဘုရားသခင်၏လက်ျာနားမှာဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ပင်ယခုသူသည်ငါတို့အဘို့ intercedes.
8:35 ထိုအခါအဘယ်သူသည်ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ငါတို့ကိုကွာစေမည်? ဆငျးရဲဒုက်ခ? သို့မဟုတ်နာကြဉ်းခြင်းဝေဒနာ? သို့မဟုတ်အစာခေါင်းပါးသောအခါ? သို့မဟုတ်အချည်းစည်းရှိခြင်း? သို့မဟုတ်ဘေး? သို့မဟုတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်? ဒါမှမဟုတ်ထားကိုထား?
8:36 ကမျြးစာလာခဲ့ပြီကြောင့်ဖြစ်ဘို့: "သင်တို့၏ ထောက်., ကျနော်တို့တနေ့လုံးအသေသတ်လျက်ရှိ. ကျနော်တို့ကအသေသတ်ခြင်းအဘို့အသိုးကဲ့သို့အကုသပေးလျက်ရှိသည်။ "
8:37 သို့သော်ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုငါတို့ကျော်လွှားနိုင်ဖို့, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကိုချစ်တော်မူသောသူ၏.
8:38 ငါအခြို့တို့လညျးမသေခြင်းဖြစ်၏, မဟုတ်သလိုအသက်တာ, မဟုတ်သလိုကောင်းကင်တမန်, မဟုတ်သလိုကျောင်းအုပ်ကြီး, မဟုတ်သလိုကမ္ဘာ့အင်အားကြီး, မပစ္စုပ္ပန်အမှုအရာ, မအနာဂတ်အမှုအရာ, မဟုတ်သလိုတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ,
8:39 မဝဂ်, မနက်နဲသောပင်လယ်, မျှမကအခြားအရာကိုဖန်ဆင်း, ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုမကွာနိုင်ပါလိမ့်မည်, ယေရှုခရစ်၌ငါတို့သခင်တည်းဟူသောဖြစ်ပါသည်.
9:1 ငါသည်ခရစ်တော်နှင့်သမ္မာတရားကိုဟောပြောပါ၏; ငါမုသာမ am. အကြှနျုပျ၏သြတ္တပ္ပစိတ်ကိုသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၌အကြှနျုပျမှသက်သေခံချက်ကိုကမ်းလှမ်း,
9:2 ငါ့အထဲမှာညှိုးငယ်ကြီးသောကြောင့်, ငါ့နှလုံးအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်သည်ဝမ်းနည်းခြင်းရှိပါတယ်.
9:3 ငါခရစ်တော် anathemized စေခြင်းငှါအလိုရှိခဲ့, ငါ့ညီအစ်ကိုတို့၏မျက်နှာကို ထောက်., ငါ့အနောက်မှာဇာတိပကတိအားဖြင့်နေသော.
9:4 ဤရွေ့ကားဣသရေလလူ, သားကဲ့သို့မွေးစားပိုငျဆိုငျဘယ်သူကိုမှ, ဘုန်းအသရေနှင့်သေတမ်းစာနှင့်, နှင့်ပေးကမ်းခြင်းနှင့်ပညတ်တရား၏အောက်ပါ, ဂတိတော်နှင့်.
9:5 သူတို့ဘိုးဘေးတွေက, သူတို့နှင့်ထံမှ, ဇာတိပကတိအားဖြင့်, သူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို, ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကျော်သောသူသည်, မင်္ဂလာရှိသောဘုရားသခငျသညျ, အားလုံးထာဝရအဘို့. အာမင်.
9:8 တစ်နည်းပြောရရင်တော့, those who are the sons of God are not those who are sons of the flesh, but those who are sons of the Promise; these are considered to be the offspring.
9:16 ထို့ကြောင့်, it is not based on those who choose, nor on those who excel, but on God who takes pity.
9:18 ထို့ကြောင့်, he takes pity on whomever he wills, and he hardens whomever he wills.
9:19 ဆိုတော့, you would say to me: “Then why does he still find fault? For who can resist his will?"
9:20 အချင်းလူ, who are you to question God? How can the thing that has been formed say to the One who formed him: “Why have you made me this way?"
9:21 And does not the potter have the authority over the clay to make, from the same material, တကယ်ပါပဲ, one vessel unto honor, yet truly another unto disgrace?
9:26 နှင့်ဤဖြစ်ရကြလိမ့်မည်: in the place where it was said to them, ‘You are not my people,’ there they shall be called the sons of the living God.”
9:31 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, ဣသရ, though following the law of justice, has not arrived at the law of justice.
9:33 ဒါကြောင့်ရေးသားခဲ့သကဲ့သို့: "အကယ်, I am placingastumbling block in Zion, အရှုပ်တော်ပုံနှင့်ကျောက်. But whoever believes in him shall not be confounded.”
10:1 ညီအစျကို, certainly the will of my heart, and my prayer to God, is for them unto salvation.
10:3 အကြောင်းမူကား,, being ignorant of the justice of God, and seeking to establish their own justice, they have not subjected themselves to the justice of God.
10:4 For the end of the law, ခရစ်တော်, is unto justice for all who believe.
10:6 But the justice that is of faith speaks in this way: Do not say in your heart: “Who shall ascend into heaven?" (ကြောင်း, to bring Christ down);
10:7 “Or who shall descend into the abyss?" (ကြောင်း, to call back Christ from the dead).
10:9 သင်သည်သင်၏နှုတ်နှင့်ဝန်ခံလျှင်သခင်ယေရှု၏အခွင့်တော်အဘို့, သင်သည်သင်၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လျှင်, ထိုဘုရားသခင်သည်သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသူ့ကိုပြီ, သငျသညျကယျတငျခွငျးခံရကြလတံ့.
10:10 ကိုစိတျနှလုံးနှငျ့များအတွက်, ကျွန်တော်တို့ဟာတရားမျှတမှုတို့အားမယုံကြည်; ဒါပေမယ့်ခံတွင်းနှင့်အတူ, ဝန်ခံကယ်တင်ခြင်းအလိုငှါဖြစ်ပါသည်.
10:11 သမ္မာကျမ်းကပြောပါတယ်များအတွက်: "သူ့ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်မိန်းမောတွေဝေလိမ့်မည်မဟုတ်။ "
10:12 ယုဒလူနှင့်ဂရိတို့အကြားမျှမခြားနားခြင်းရှိ၏များအတွက်. တူညီသောအဘို့ထာဝရဘုရား၏ကျော်အားလုံးပါပဲ, ကြွယ်ဝစွာသူ့ကိုဌနာသောသူအပေါင်းတို့အတွက်.
10:14 ထိုအခါဘယ်သို့သောလမ်း၌မယုံကြည်ဘူးသောသူတို့ကသူ့ကိုပဌလိမ့်မည်? ဒါမှမဟုတ်ဘာလမ်းအတွက်သူ့ကိုမကြားစဖူးတဲ့သူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်မည်? ထိုအဘယ်သို့သောလမ်းအတွက်သူတို့ကဟောပြောခြင်းမရှိဘဲသူ့ကို၏စကားကိုနားထောင်မည်?
10:15 အမှန်တကယ်, ဘယ်လမ်းအတွက်သူတို့တရားကိုဟောပြောပါလိမ့်မယ်, သူတို့ရှိရာသို့စေလွှတ်ပြီမဟုတ်လျှင်, ကမျြးစာလာခဲ့ပြီသကဲ့သို့: "သာယာလှပတဲ့မိဿဟာယဧဝံဂေလိသူတွေကို၏ခြေရင်းများမှာမည်သို့, ကောင်းသောအရာကိုဧဝံဂေလိသောသူတို့၏အမျိုးအ!"
10:16 သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ဧဝံဂေလိတရားကိုနာခံမှုများမှာ. ကျဟရှောယကပြောပါတယ်များအတွက်: "သခင်, မူသောငါတို့၏အစီရင်ခံစာယုံ?"
10:17 ထို့ကြောင့်, ယုံကြည်ခြင်းအားကြားနာမှုကနေဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ကြားနာမှုခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်.
10:18 ဒါပေမယ့်ငါဆိုသည်ကား: သူတို့မကြားဘူး? မုချမျာ​​းအတွက်: "သူတို့ရဲ့အသံချဲ့မြေကြီးသားအပေါင်းတို့လျှောက်လုံးဘွားသွားပြီဟု, လောကီသားအပေါင်းတို့၏န့်အသတ်တို့အားနှင့်သူတို့၏စကားသည်။ "
10:19 ဒါပေမယ့်ငါဆိုသည်ကား: Has Israel not known? ပထမဦးဆုံး, Moses says: “I will lead you intoarivalry with those who are notanation; in the midst ofafoolish nation, I will send you into wrath.”
11:1 ထို့ကြောင့်, ငါဆိုသည်ကား: Has God driven away his people? Let it not be so! ငါအဘို့အ, လွန်း, am an Israelite of the offspring of Abraham, ဗင်္ယာမိန်အမျိုးထဲကနေ.
11:3 "သခင်, they have slain your Prophets. They have overturned your altars. And I alone remain, and they are seeking my life.”
11:5 ထို့ကြောင့်, ဒီနည်းအတိုင်းပဲ, again in this time, there isaremnant that has been saved in accord with the choice of grace.
11:7 လာမယ့်ဆိုတာဘာလဲ? What Israel was seeking, he has not obtained. But the elect have obtained it. အမှန်တကယ်, these others have been blinded,
11:8 ဒါကြောင့်ရေးသားခဲ့သကဲ့သို့: “God has given themaspirit of reluctance: eyes that do not perceive, and ears that do not hear, even until this very day.”
11:9 And David says: “Let their table become likeasnare, andadeception, နှင့်အရှုပ်တော်ပုံ, andaretribution for them.
11:10 Let their eyes be obscured, သူတို့မမြင်နိုင်စေခြင်းငှါဒါ, and so that they may bow down their backs always.”
11:11 ထို့ကြောင့်, ငါဆိုသည်ကား: Have they stumbled in suchaway that they should fall? Let it not be so! အဲဒီအစား, by their offense, salvation is with the Gentiles, so that they may bearival to them.
11:13 For I say to you Gentiles: မုချ, as long as I am an Apostle to the Gentiles, I will honor my ministry,
11:19 ထို့ကြောင့်, you would say: The branches were broken off, so that I might be grafted on.
11:22 သို့ဖြစ်., notice the goodness and the severity of God. မုချ, toward those who have fallen, there is severity; but toward you, there is the goodness of God, if you remain in goodness. ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, you also will be cut off.
11:23 ထို့အပြင်, if they do not remain in unbelief, they will be grafted on. For God is able to graft them on again.
11:24 So if you have been cut off from the wild olive tree, which is natural to you, နှင့်, contrary to nature, you are grafted on to the good olive tree, how much more shall those who are the natural branches be grafted on to their own olive tree?
11:25 For I do not want you to be ignorant, ကိုညီအစျ, of this mystery (lest you seem wise only to yourselves) thatacertain blindness has occurred in Israel, until the fullness of the Gentiles has arrived.
11:26 နှင့်ဤလမ်းအတွက်, all of Israel may be saved, ဒါကြောင့်ရေးသားခဲ့သကဲ့သို့: “From Zion shall arrive he who delivers, and he shall turn impiety away from Jacob.
11:28 မုချ, according to the Gospel, they are enemies for your sake. But according to the election, they are most beloved for the sake of the fathers.
11:30 And just as you also, အတိတ်ကာလ၌, did not believe in God, but now you have obtained mercy because of their unbelief,
11:36 For from him, and through him, and in him are all things. To him is glory, အားလုံးထာဝရအဘို့. အာမင်.
12:1 ဆိုတော့, တောင်းပန်ပါတယ်, ကိုညီအစျ, by the mercy of God, that you offer your bodies asaliving sacrifice, holy and pleasing to God, with the subservience of your mind.
12:2 And do not choose to be conformed to this age, but instead choose to be reformed in the newness of your mind, so that you may demonstrate what is the will of God: အဘယျအကောငျး၏, and what is well-pleasing, and what is perfect.
12:5 ဒါကြောင့်လည်းငါတို့, အများအပြားဖြစ်ခြင်း, ခရစ်တော်အားဖြင့်တကိုယ်တည်းဖြစ်ကြောင်း, အသီးအသီးတစျအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အခြားတဦးကို.
12:6 ငါတို့သည်အသီးသီးဟာလောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေများ, ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးပြီးမှသိရသည်သောကျေးဇူးတော်နှင့်အညီ: အနာဂတ္တိရှိမရှိ, ယုံကြည်ခြင်း၏အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်နှင့်အတူသဘောတူညီချက်အတွက်;
12:7 သို့မဟုတ်ဝန်ကြီးဌာနက, အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်အတွက်; သို့မဟုတ်သူမသှနျ, ဒေသနာ၌;
12:8 သူတိုကျတှနျး, တိုကျတှနျးနှိုးဆျောအတွက်; သူပေးသည်, ရိုးရှင်းအတွက်; သူအုပ်ချုပ်, လျှောက်လွှာ; သနားတော်မူသောသူ, အကြင်နာအအတွက်.
12:9 ချစ်ခြင်းမေတ္တာ false ကင်းစေ: မကောင်းသောအမှုကိုမုန်း, ကောင်းသောအရာကိုမှဖက်တွယ်,
12:10 ခွာချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်နှင့်တယောက်ကိုတယောက်မေတ္တာရှင်, ဂုဏ်အသရေအတွက်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ထက်သာလွန်:
12:11 လျှောက်လွှာ, ပျင်းမ; ၌စိတ်ဝိညာဉ်အား, အားကြီးသော; သခင်ဘုရား၏အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ကို;
12:12 ကိုမြော်လ, ဝမ်းမြောက်သောသူ; ဆငျးရဲဒုက်ခအတွက်, မွဲ; ဆုတောင်းပဌနာ, အစဉ်အဆက်-ဆန္ဒရှိ;
12:13 သန့်ရှင်းသူတို့၏အခက်အခဲများအတွက်, မျှဝေခြင်း; ဧညျ့အတွက်, စေ့စေ့နားထောင်.
12:14 သင်ညှဉ်းဆဲသောသူတို့အကောင်းကြီးပေးတော်မူ: ကောင်းကြီးပေးတော်မူ, နှင့်မကျိန်ဆဲဘူး.
12:15 ဝမ်းမြောက်သောသူသောသူတို့နှင့်အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့. ငိုကြွေးသောသူတို့နှင့်အတူငိုရမည်.
12:16 အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်မျက်နှာသို့တူညီသောစိတ်၏ဖြစ်: ချီးမြှောက်ခြင်းအဘယျသို့ savoring မဟုတ်, ဒါပေမယ့်နှိမျ့ခခြွငျးအတွက်မထားဘဲအခွင့်ပေးခြင်း. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှပညာရှိတဲ့ပုံပေါက်ဖို့ရွေးချယ်မထားပါနဲ့.
12:19 Do not defend yourselves, dearest ones. အဲဒီအစား, step aside from wrath. ကျမ်းစာလာသည်ကား: “Vengeance is mine. I shall give retribution, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏။ "
13:2 ဆိုတော့, whoever resists authority, resists what has been ordained by God. And those who resist are acquiring damnation for themselves.
13:5 ဒီအတွက်ကြောင့်, it is necessary to be subject, not solely because of wrath, but also because of conscience.
13:6 ထို့ကြောင့်, you must also offer tribute. For they are the ministers of God, serving him in this.
13:7 ထို့ကြောင့်, render to all whatever is owed. Taxes, to whom taxes is due; revenue, to whom revenue is due; fear, to whom fear is due; ဂုဏ်, to whom honor is due.
13:8 သငျသညျဘယ်သူကိုမျှမပြောကြွေးသင့်တယ်, အချင်းချင်းချစ်သကဲ့သို့ မှလွဲ.. မိမိအိမ်နီးချင်းကိုချစ်သောသူအကြင်သူသည်တရားတော်သည်ပြည့်စုံပြီ.
13:9 ဥပမာအားဖြင့်: သငျသညျမျောက်လိမ့်မည်မဟုတ်. သငျသညျမသတ်ရကြမည်. သငျသညျမခိုးရကြလိမ့်မည်. သငျသညျမမှန်သောသက်သေကိုမပြောရကြ. သငျသညျတပ်မက်ရကြလိမ့်မည်မဟုတ်. နှင့်အခြားပညတ်မရှိပါလျှင်, ဒါကြောင့်ဤစကားလုံးအတွက်တက်အနှစ်ချုပ်ဖြစ်ပါတယ်: သင်ကိုယ်တိုင်အဖြစ်သင်၏အိမ်နီးချင်းကိုချစ်ရကြမည်.
13:10 အိမ်နီးချင်း၏မေတ္တာကိုအဘယ်သူမျှမထိခိုက်စေပါဘူး. ထို့ကြောင့်, ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရား၏ plenitude ဖြစ်ပါသည်.
13:11 ငါတို့သည်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကိုသိရ, ကျွန်တော်တို့ကိုအိပ်မှထရန်အဘို့အကြောင်းယခုအခြိနျနာရီဖြစ်ပါသည်. ယခုပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးယုံကြည်သောအခါထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည်.
13:12 ညဉ့်ကိုလွန်ပြီ, နေ့အနီးသို့. ထို့ကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ကိုမှောင်မိုက်အမှုတော်တို့ကိုဘေးဖယ်ချပစ်ကြကုန်အံ့, နှင့်အလင်း၏လက်နက်စုံကိုဝတ်လျက်ခံရ.
13:13 ကျွန်တော်တို့ကိုရိုးရိုးသားသားလမ်းလျှောက်စို့, ထိုနေ့၌ရှိသကဲ့သို့, မ carousing နှင့်မူးအတွက်, မပွုကနှင့်မတရားသောမေထုန်အတွက်, မရန်တွေ့ခြင်းနှင့်ငြူစူသောစိတ်ရှိ.
13:14 အဲဒီအစား, သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်အတူအဝတ်ကိုဝတ်ရမည်, နှင့်၎င်း၏အလိုဆန္ဒများအတွက်အသားကိုအဘို့အဘယ်သူမျှမပြဋ္ဌာန်းချက်ပါစေ.
14:8 For if we live, we live for the Lord, and if we die, we die for the Lord. ထို့ကြောင့်, whether we live or die, we belong to the Lord.
14:10 သို့ဖြစ်., why do you judge your brother? Or why do you despise your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ.
14:11 ကျမ်းစာလာသည်ကား: “As I live, ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ, every knee shall bend to me, and every tongue shall confess to God.”
14:12 ဆိုတော့, each one of us shall offer an explanation of himself to God.
14:13 ထို့ကြောင့်, we should no longer judge one another. အဲဒီအစား, judge this toagreater extent: that you should not place an obstacle before your brother, nor lead him astray.
14:14 ငါသိတယ်, with confidence in the Lord Jesus, that nothing is unclean in and of itself. But to him who considers anything to be unclean, it is unclean to him.
14:16 ထို့ကြောင့်, what is good for us should not beacause of blasphemy.
14:19 ဆိုတော့, let us pursue the things that are of peace, and let us keep to the things that are for the edification of one another.
14:20 Do not be willing to destroy the work of God because of food. မုချ, all things are clean. But there is harm foraman who offends by eating.
15:4 For whatever was written, was written to teach us, သောကြောင့်, through patience and the consolation of the Scriptures, we might have hope.
15:6 သောကြောင့်, together with one mouth, you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.
15:7 ဒီအတွက်ကြောင့်, accept one another, just as Christ also has accepted you, in the honor of God.
15:9 and that the Gentiles are to honor God because of his mercy, ဒါကြောင့်ရေးသားခဲ့သကဲ့သို့: "ဒီအတွက်ကြောင့်, I will confess you among the Gentiles, အိုထာဝရဘုရား, and I will sing to your name.”
15:10 တဖန်တုံ, သူကပြောပါတယ်: “Rejoice, အိုတပါးအမျိုးသားတို့, along with his people.”
15:11 တဖန်တုံ: “All Gentiles, သခင်ဘုရားကိုချီးမွမ်း; နှင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့, magnify him.”
15:12 တဖန်တုံ, Isaiah says: “There shall bearoot of Jesse, and he shall rise up to rule the Gentiles, and in him the Gentiles shall hope.”
15:14 But I am also certain about you, ငါ့ညီအစ်ကိုတို့, that you also have been filled with love, completed with all knowledge, so that you are able to admonish one another.
15:15 But I have written to you, ကိုညီအစျ, more boldly than to the others, as if calling you to mind again, because of the grace which has been given to me from God,
15:17 ထို့ကြောင့်, I have glory in Christ Jesus before God.
15:19 with the power of signs and wonders, by power of the Holy Spirit. ဤနည်း၌, ယေရုရှလင်မြို့မှ, throughout its surroundings, as far as Illyricum, I have replenished the Gospel of Christ.
15:22 ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း၏, I was greatly hindered in coming to you, and I have been prevented until the present time.
15:23 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်ယခု, having no other destination in these regions, and having already hadagreat desire to come to you over the past many years,
15:27 And this has pleased them, because they are in their debt. အကြောင်းမူကား,, since the Gentiles have become partakers of their spiritual things, they also ought to minister to them in worldly things.
15:28 ထို့ကြောင့်, when I have completed this task, and have consigned to them this fruit, I shall set out, by way of you, to Spain.
15:30 ထို့ကြောင့်, တောင်းပန်ပါတယ်, ကိုညီအစျ, through our Lord Jesus Christ and though the love of the Holy Spirit, that you assist me with your prayers to God on my behalf,
15:33 And may the God of peace be with you all. အာမင်.
16:5 and greet the church at their house. Greet Epaenetus, ငါချစ်ရာသခင်, who is among the first-fruits of Asia in Christ.
16:9 Greet Urbanus, our helper in Christ Jesus, and Stachys, ငါချစ်ရာသခင်.
16:12 Greet Tryphaena and Tryphosa, who labor in the Lord. Greet Persis, အများဆုံးချစ်သူတို့, who has labored much in the Lord.
16:16 သန့်ရှင်းသောနမ်းဖြင့်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှုတ်ဆက်ကြလော့. All the churches of Christ greet you.
16:17 But I beg you, ကိုညီအစျ, to take note of those who cause dissensions and offenses contrary to the doctrine that you have learned, and to turn away from them.
16:18 For ones such as these do not serve Christ our Lord, but their inner selves, နှင့်, through pleasing words and skillful speaking, they seduce the hearts of the innocent.
16:19 But your obedience has been made known in every place. ဆိုတော့, I rejoice in you. But I want you to be wise in what is good, and simple in what is evil.
16:21 တိမောသေကို, my fellow laborer, သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏, and Lucius and Jason and Sosipater, my kinsmen.
16:22 ငါ, Tertius, who wrote this epistle, greet you in the Lord.
16:23 Gaius, my host, and the entire church, သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏. Erastus, the treasurer of the city, သင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏, and Quartus, ညီအစ်ကိုတစ်ဦး.
16:24 ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေသတည်း. အာမင်.
16:27 ဘုရားသခင်အား, who alone is wise, ယေရှုခရစ်အားဖြင့်, to him be honor and glory forever and ever. အာမင်.